‘Madzimai munozozviwanza’ | Kwayedza
16 Nov, 2018 - 00:11	 2018-11-15T06:58:27+00:00 2018-11-16T00:02:48+00:00 0 Views
VAMWE vakuru vemachechi vanoti madzimai akaroorwa “anozozviwanzawo” kana pari panyaya dzekuremekedza vakuru vemachechi asi vachitarisira varume vavo pasi.
Pasto Hazvinei Muchefa vechechi yeReedemed Christian Fellowship Ministries International (RECFEMI) iri kuUplands, kuWaterfalls, muHarare, vanoti vafundisi vanofanirwa kuparidza shoko sezvariri vachikurudzira kusimba kwedzimba dzevanhu vakaroorana kwete kuparadza.
“Sechechi, tinodzidzisa madzimai akaroorwa kuremekedza varume vavo kuti vanababa ndivo misoro yemba ivo vova pasi pevarume vavo chaivo. Tinoti madzimai ngavazvininipise kuvarume vavo ivo varume vopa rudo kuvakadzi vavo,” vanodaro.
Kuchiti Pastor Muchefa vanoti tsika dzakanaka dzikaitwa nemudzimai kumba, murume anokwanisa kutendeuka kuchechi kunoenda mukadzi wake.
“Kuenda kuchechi hazvirevi kuti tave kurasa hunhu netsika dzedu uyewo chivanhu nehunhu. Kutenda murume wako nemutupo wake wakamupfugamira hakuna chakaipa, mudzimai asingadaro kutsaudzira. Chatisingade kurova makuva nezvimwe,” vanodaro.